Nuxurka Kulan Dhex Maray Wasiirka Madaxtooyada DDS Iyo Odayaasha Magaalada Jigjiga - Jigjiga Online
HomeSomalidaNuxurka Kulan Dhex Maray Wasiirka Madaxtooyada DDS Iyo Odayaasha Magaalada Jigjiga
Jigjiga (JigjigaOnline) – Wasiirka madaxtooyada Dawladda Deegaanka Soomaalida, Xasan Daadhi ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah odayaasha magaalada Jigjiga, kuwaas oo Xukuumaddii hore ee Cabdi Iley ay qasab kaga qaadday dhulkoodii.
Odayaasha ayaa maalintii shalay ka gadooday isku-day ay xukuumaddu ku doonayso in dhulkii qasabka ay xukuumaddii hore ku qaadatay ay kaga samaysato dhismeyaal, iyadoo ay odayaashuna sugayeen in dib loogu celiyo dhulkooda sidii uu hore ugu ballan-qaaday madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar.
Shacabka magaalada ayaa subaxnimadii hore ku waabariistay dhulka oo lagu soo rogay qalabkii lagu dhisayey iyo shirkad dhisme oo qandaraaska soo qaadatay oo ay shaqaalaheedii joogtaan, waxaanay taasi keentay in halkaas uu buuq ka dhasho.
Goobtan oo cidda dhisanaysa aan wali si buuxda loo xaqiijinin, ayaa waxa uu sababay inay isku dhacaan shaqaalihii shirkadda iyo shacabku, waxaana halkaas yimid ciidamo boolis ah, kuwaas oo uu goobta ka kexeeyey Komishaneerka Booliska Maxamed Yare oo mar dambe soo gaadhay goobta.
Haddaba, wasiirka Madaxtooyada Dawladda Deegaanka Soomaalida, Xasan Maxamed Xuseen (Xasan Daadhi) iyo odayaasha magaalada ayaa xalay kulan dhex-maray waxay kaga wada-hadleen arrinta dhulka.
Sida ay JigjigaOnline u xaqiijiyeen goob-joogeyaal codsaday in aan magacyadooda la sheegin, waxa uu wasiirku u sheegay odayaasha in dhulka ay iyagu bixiyeen, sidaas darteedna ay tahay inay ogolaadaan in dhismahaasi socdo, taasna waxa si adag u diiday odayaasha oo u sheegtay in aanay aqbali karin in dhulkii dulmiga lagaga qaatay ee xukuumaddu u sheegtay in loosoo celinayo in haddana uu damac kale ku yimaaddo oo cid kale qaadato.
Ilo-wareedyadu waxay intaas ku dareen in wasiirku uu ku adkaystay in dhulkaas ay dhisan doonto ciddii ay xukuumaddu siisay, balse taas beddelkeeda uu ka shaqayn doono sidii uu ugu soo celin lahaa dhulka kale ee hadhsan, waxaana mar kale diidmo kaga jawaabay odayaasha.
Sida ay xoguhu sheegayaan, wasiirku waxa uu u sheegay odayaasha in uu u geyn doono Madaxweynaha oo ay tabashadooda oo buuxda u sheegan doonaan, laakiin waxa uu kulankaasi xalay ku dhamaaday natiijo la’aan iyo iyadoo aan wax natiijo ah kasoo bixin.
Si kastaba ha ahaatee, Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa wali laga sugayaa inay fuliso ballan-qaadyadii ay hore u samaysay ee ahaa in dhulka la boobay ay dib ugu celin doonto shacabkii laga dhacay.